Dredges roa no miasa mba hamerenana indray ny fialam-boly ho an'ny biby eto Delaware
Oktobra 13, 2015
DELAWARE, Etazonia - Hain-droa Ellicott 460SL roa no ampiasaina ankehitriny amin'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny amin'ny rano any amin'ny Prime Hook National Wildlife Refuge any Delaware. Ity dia iray amin'ireo tetik'asa famerenana amin'ny lao lehibe indrindra any atsinanan'i Etazonia Ho famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana amoron-dranomasina / sakana izay manodidina ny 4,000 hektara (1618.7 ha) ao anatin'ny rafitra fanondrahana rano velona teo amin'ny fialokalofana. Ity famerenana amin'ny lao mando amoron-dranomasina ity dia manatsara ny fahafahan'ny fialofana honohono hanoherana ny tafiotra amin'ny ho avy sy ny fiakaran'ny ranomasina ary manatsara ny toeram-ponenan'ireo vorona mpifindra monina sy ny bibidia hafa.
Iray amin'ireo drogelin'i Ellicott 460SL roa
AMEC sy ny ekipa-joroandrefesin'izy ireo, Dredge America, dia nahitam-pahombiazana be hatramin'ny nanombohan'ny asa famerenana amin'ny laoniny Jona. Ny dredge tsirairay dia miasa 10 ora isan'andro, enina andro isan-kerinandro. “Faly izahay amin'ireo trondro ary mankasitraka ny fanohanan'i Ellicott tsy amin'ity tetikasa ity ihany fa amin'ny tetikasan'i Dredge America manerana an'i Etazonia”, hoy i Sam Robinson, injenieran'ny Project Dredge America.
Izy ireo dia nandona mihoatra noho 1.5 kilaometatra (2.4 km) onjam-pahavoana ary mikasa ny hamily ny 30 total kilometatra (48.3 km) amin'ny fahavaratra manaraka.
Jason Collene ny Dredge America akaikin'ny dredge Ellicott 460SL
Ny dingana voalohany amin'ny tetikasa dia hifantoka amin'ny fampidinana ny làlan-drano sy hanatsarana ny fihodinan'ny rano. Hanomboka ny fantsom-borona eny amoron-tsiraka izy ireo hanidy ny vaky ireo ary hamorona tohatra miolakolaka. Ny fitomboan'ny andiam-pitenenana, karazana mihinana ahitra an-davan'andro, dia nahatonga ny fampihenan'ny velaran-tany. Ny fametrahana onjan-drano tsy mitsaha-mitombo dia hanampy amin'ny famongorana ireo fragphita. Ny famerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny rano sy ny voajanahary dia ahafahan'ny zavamaniry sira mamerina sy miroborobo, manatsara ny fiorenan'ny honahona amin'ny alàlan'ny rivo-mahery sy ny haavon'ny ranomasina, ary manome toeram-ponenana sarobidy ho an'ny vorona sy ny biby hafa.
Fialam-boly ho an'ny biby goavam-be
Afaka hijery ny dredges mandeha ao amin'ny fantsona YouTube an'i Ellicott. Ny Prime Hook National Wildlife Refuge dia nandefa fanavaozana ihany koa ny momba azy ireo Facebook pejy, ka zahao ihany fa!
Famaritana - Dredge Dragon 460SL Swinging Dredge
Esory ny diameter: 10 ″ (245 mm)
Max. Fangirifiriana: 20 ′ (6.1 m)
Powerter Cutter: 40 HP (30 kW)
Raha te hahalala bebe kokoa, azafady miangavy Ramatoa Robin Manning, Administrator'ny varotra.